ရထားခရီးစဉ်ကိုလမ်းခရီးစဉ်ထက် သာ. ကောင်းသောအဘယျကွောငျ့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားခရီးစဉ်ကိုလမ်းခရီးစဉ်ထက် သာ. ကောင်းသောအဘယျကွောငျ့
တစ်မိသားစုများအတွက်အားလပ်ရက်စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, စုံတွဲသို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စု, ကသဘောတူရန်လူတိုင်းရဖို့မကြာခဏခက်ခဲမယ့်. အရာတစ်ခုမှာသူကအပေါ်သဘောတူရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်, သို့သော်, ကားငှားသို့မဟုတ်ရထားသွားကြဖို့ရှိမရှိဖြစ်ပါသည်. ရထားခရီးစဉ် tripping လမ်းထက် သာ. ကောင်း၏အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာင်.
တစ်လမ်းခရီးစဉ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ, တစ်စုံတစ်ဦးကအမြဲတမ်းဒရိုင်ဘာဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်. ဒါကအနည်းဆုံးလူတစ်ဦးပင်ပန်းသွားချင်သည့်နေရာကိုတစ်ဦးချင်းစီခြေထောက်မှာရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတယ်. အညွှန်း၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပျောက်ဆုံးရတဲ့၏ဖြစ်နိုင်ခြေ Add, သငျတို့သဖြစ်လိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေ booking ယခုဆိုနေ့က, ရထားခရီးစဉ်များသွားလာရန်လမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ဖတ်ပါ.
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့ကလေးဘဝလမ်းခရီးစဉ်အပေါ်သှားလြှငျ, သင်တစ်ဦးဝင်းဒိုးကိုထိုင်ခုံများအတွက်ရန်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းပါလိမ့်မယ်, ဘယ်သူမှနောက်ကျောထိုင်ခုံအလယ်၌ squashed ခံရဖို့လိုလားပြီးကတည်းက. စီးနင်း tripping ရထားတွင်, အားလုံးထိုင်ခုံအညီအမျှအဆင်ပြေဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးရှိ ကောင်းသောအမြင်. အသစ်ကပေါ်ထိုင်ခုံ Trenitalia ရထား အထူးသဖြင့်အဆင်ပြေများမှာ, ဒါ Frecciarossa အပေါ်တစ်ဦးခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်ဖို့သေချာပါစေ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား.
မီးရထားရထားပေါ်တွင် Tripping နှင့်အိပ်စက်ခြင်း
ကားများအတွက်, ကိုသာခရီးသည်များပင်ပြီးရင်အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအဆင်ပြေအိပ်ရာထဲမှာမင့်. နေ့ချင်းညချင်းရထား ထို့အပြင်စဉ်အစာရှောင်သင်၏နောက် destination သို့လာပြီတဲ့စမတ်လမ်းရှိပါတယ် နေရာထိုင်ခင်းပေါ်ချွေတာ ညဉ့်အဘို့.
ရထားနှင့်အတူ Cologne မှဘရပ်ဆဲလ်
ရထားများနှင့်အတူ Cologne မှဗီယင်နာမှ
ရထားများနှင့်အတူ Cologne မှ Innsbruck သို့
ရထားခရီးစဉ် vs ယာဉ်ရပ်နား
တစ်လမ်းခရီးစဉ်တွင်, သင်သည်သင်၏ကားကိုရပ်ဖို့နေရာရှာတွေ့ဖို့လိုအပ် အန္တရာယ်ကင်းစွာ ညက. သော်လည်းပိုပြီးခက်ခဲဘာလဲ, မြို့ပြဒေသများရှိရပ်နေရာရှာတွေ့ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် Colosseum လိုပဲတိုးရစ်ဒေသများမှာဖြစ်ပါတယ် ရောမမြို့ သို့မဟုတ် Florence မှာ Florence ၏ Duomo. အာကာသဤဆိုဒ်များန်းကျင်တစ်ဦးပရီမီယံမှာကတည်းက, ယာဉ်ရပ်နားလွန်းတဲ့ပရီမီယံကုန်ကျ.
လမ်းခရီးသွားက၎င်း၏အဆင့်မြင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဘက်ထရီ operated ကားများငှားရမ်းရန်ခက်ခဲများနှင့်စျေးကြီးတယ်. ကံကောင်းတာက – ပိုကောင်းတဲ့လမ်းလည်းမရှိ. tripping ရထား – အထူးသဖြင့်အပေါ် အသစ်များရထား – တစ်အများကြီးရှိတယ် မိခင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအနိမ့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခံစားနိုငျ အားလပ်ရက်အပြစ်ရှိတယ်-အခမဲ့.
စွန့်စားမှု tripping သင့်ရဲ့ရထားစာအုပ်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်? အလည်အပတ် တစ်ဦးကရထား Save နှင့်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေရဖို့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-train-tripping-is-better-than-road-tripping%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ရထားခရီးရှည်များ	roadtrip	ရထားခရီးစဉ်